​पार्टी एकतापछिको थप चुनौती
रवीन्द्र श्रेष्ठ । एमाले र माओवादीसँग नेता कार्यकर्ताहरुको ठूलो फौज छ । एकीकृत पार्टी र सरकारका लागि सयौं बेरोजगार केन्द्रीय नेताहरु, हजारौं प्रादेशिक बेरोजगार नेताहरु, दशौं हजार स्थानीय बेरोजगार कार्यकर्ताहरु तथा लाखौं बेरोजगार पार्टी सदस्य कार्यकर्ताहरुको व्यवस्थापनको चुनौती आएको छ । हुन त नयाँ एकीकृत पार्टी र सरकारको दायित्व देशभरका सबै जनताकै हो, तर यदि पार्टीका यी नेता कार्यकर्ताहरुको बेरोजगार फौजको व्यवस्थापन भएन भने आन्तरिक… विस्तृत समाचार
मन्त्री ट्वाँ !
गत आइतबार घडीमा १२.३० बजेको थियो । उनको मोबाइलमा लगातार घण्टी बज्न थालेपछि एउटा कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि बनेका सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्र कार्की कार्यक्रम छोट्याएर मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा जान हतारिएका थिए । संविधान संशोधनको महत्वपूर्ण बैठक भएको र सरकारको पनि प्रवक्ता भएकोले उनलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पुग्नु अनिवार्य थियो । उता प्रचण्डको मोबाइलमा पनि लगातार घण्टी बजिरहेको थियो । प्रचण्ड पनि हतारिएका थिए । त्यतिबेला दिउँसोको २ बजेको… विस्तृत समाचार
​कार्कीको जुहारी ?
युरोपबाट फर्किएलगत्तै सहरमा लोकमानसिंह कार्कीको चर्चा छ । चर्चा अरुको कारणले होइन, कार्की आफ्नै कारणले बनिरहेका छन् । कहिले कनकमणि दीक्षितसँग जुहारी त कहिले सुशीला कार्कीसँग । हुँदाहुँदा अहिले डा. गोविन्द केसीसँग कार्कीको जुहारी चलेको छ । कसैले यसलाई ठिक भनिरहेका छन् त कसैले बेठिक । दोहोरी र जुहारीले सर्वसाधारणलाई सित्तैमा मनोरञ्जन त प्राप्त होला, त्यसले कार्कीको ‘हाइट’ भने बढाउँदैन । डा. केसीका विषयमा अख्तियारले… विस्तृत समाचार
​अनसन रोग !
डाक्टरको काम अनसन बस्नु होइन । अनसन नै बस्ने भए, डाक्टरको जागिर किन खानु ? अनसन भन्नासाथ डा. गोविन्द केसीको नाम जोडिइहाल्छ । एक पटक होइन, दुई पटक होइन, केसीले आफ्ना माग पूरा गराउन पटक–पटक अनसन बसेर सरकारलाई थर्काइरहेका छन् । यो उनको व्यापार हो कि आदर्श त्यो कुरा उनैले जानुन् । यसमा उनको के स्वार्थ छ, त्यो त उनको भित्री आत्मालाई नै थाहा होला,… विस्तृत समाचार
​प्रचण्डलाई डर !
प्रचण्डले अष्ट्रेलिया भ्रमण अचानक रद्ध गरे । उनी अष्ट्रेलिया पुगेको भए उतै नरसंहारको आरोपमा पक्राउ पर्थे, वा पर्थेनन् त्यो त प्रचण्डलाई नै थाहा छैन । तर, एकाएक बजारमा प्रचण्ड अष्ट्रेलियामा पक्राउ पर्ने हल्ला चल्यो । त्यसपछि उनीले भ्रमण रद्द गरेको विज्ञप्ति आयो । यो त हल्लाको कुरो भो † चुरो कुरो त उनी ओली सरकार ढाल्न अष्ट्रेलिया जाँदै थिए । जहाँ उनको पुराना मित्र ‘आलोक’सँग… विस्तृत समाचार
​हात्ती र कांग्रेस
देशका लागि कांग्रेस घाँडो बन्दैछ । राम्रो काम गरे पनि विरोधै, नराम्रो काम गरे पनि विरोधै । त्यसैले एक पटक प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए– विरोधीले हात्ती माग्लान्, त्यो पनि दिन सकिन्छ । फेरि झोला चाहियो भन्लान्, ठिकै छ, झोला पनि दिउँला । तर त्यो हात्ती झोलामा हालिदे भनेर भन्यो भने के गर्ने ? अहिले कांग्रेसले गरिरहेको संसद अवरोध पनि त्यही निहुँ मात्रै हो । कुरो… विस्तृत समाचार
कावा खाने कि हावा ?
प्रधानमन्त्री ओलीले ठूलै झट्का दिएर हिंडेछन् भन्ने कुरो बाबुरामको भाषणले पुष्टि गर्‍यो । ओली हिंडिसकेपछि बाबुरामले ओलीलाई जवाफ फर्काउँदै भने– हामी कुखुरा जस्तो भुइँ खोस्रने होइन, चिलजस्तो आकाशमा कावा खाने पार्टी बन्न चाहन्छौं । भट्टराईको भाषण सुनेर कुशकुमार जोशीले भन्दै थिए– चिलले कहाँ कावा खान्छ । चिलले त मरेको सिनो पो खान्छ । यस्तो सिनो खाने पार्टीमा को बस्छ ? म त बस्दिनँ भन्दा रविभक्त… विस्तृत समाचार
सिंगो दशरथ रंगशाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भाषण सुन्न आतुर थियो । उद्घोषकले बारम्बार प्रधानमन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ भनेर उद्घोष गरिरहेका थिए । ओली रंगशालाभित्र छिर्नासाथ रंगशाला वल्र्डकपको मैदान जस्तो जोशिलो बन्यो । हुटिङ भयो, सिठ्ठी बज्यो । त्यसपछि बोल्ने क्रममा ओलीले नयाँ शक्तिले अरु पार्टीलाई धक्का दिए पनि एमालेलाई धक्का दिन नसक्ने चुनौती दिए । ओलीको भाषण सुनेर सबैले ताली ठोकेको देख्दा बाबुरामको मनमा चिसो… विस्तृत समाचार
विचरा करिष्मा !
अस्ति आइतबार बाबुरामको भाषण सुन्न भन्दा करिष्माको अनुहार हेर्न र वृयानीको स्वाद लिनेहरुको दशरथ रंगशालामा ठूलो भिड थियो । त्यो भिड देखेर उद्घोषिका करिष्मा मानन्धर ‘नर्भस’ भइन् । एउटाको नाम बोलाउँदा अर्कैको नाम उच्चारण गरेको सुनेर बेला–बेला बाबुराम पनि दिक्क मान्थे । मञ्चमा बोलाउने पालो थियो– प्रदिप गिरीको । तर, करिष्माले पटक–पटक डा. प्रदीप भट्टराई भनेर नाम उच्चारण गरेको सुनेर प्रदीप गिरी पेट मिचीमिची हाँसिरहेका… विस्तृत समाचार
नयाँ शक्ति पार्टीको घोषणासभामा डा. बाबुराम भट्टराईले ढोंग गर्दै भने– म आर्किटेक्ट हुँ । धेरैको घर बनाएको छु । आजसम्म आफ्नो घरचाहिँ बनाएको छैन । हरेक नेपालीको घर बन्ने दिन नआउँदासम्म बाबुरामले निजी सम्पत्ति र घर जोड्ने छैन, यो मेरो भीष्म प्रतिज्ञा हो । बाबुरामको यो आदर्श सुनेर रंगशाला एकै क्षण तालीको गडगडाहटले गुन्जियो । पत्रकारदीर्घामा जम्मा भएका पत्रकारहरुले कानेखुशी गर्न थाले– बाबुरामले सम्पत्ति नजोडेको… विस्तृत समाचार